ALAKAMISY 3 FEBROARY - ALAROBIA 9 FEBROARY 2022
FANAFIHANA TAO AVARADRANO : Mpitsabo maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Fanafihan-jiolahy miharo herisetra ka niafara tamin’ny famoizana aina no niseho tao amin’ny tokantranona mpiasan’ny fahasalamana iray tao amin’ny Distrikan’Avaradrano, ny alatsinainy 10 janoary 2022 lasa teo. 20 janvier 2022
Araka ny tatitra teo anivon’ny Minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka, omaly alarobia 12 janoary dia nanamafy fa “ nisehoana trangana herisetra sy famonoana olona tamin’ny fomba feno habibiana natao nandritra ny fanafihan-jiolahy mahery vaika tao amin’ny tokantranon’ny Médecin Inspecteur Avaradrano. Vokany, nindaosin’ny fahafatesana tamin’izany ilay ramatoa vadiny izay voalaza fa mpitsabo ihany koa. Manoloana ny zava-misy àry dia manaitra ny Mpitondra Fanjakana ny tompon’andraikitra rehetra eo anivon’ny Minisiteran’ny Fahasalamana mba handray fepetra hentitra manoloana ny tranga toy izao.”
Toherina ary melohina tanteraka ny fanaovana herisetra amin’ny endriny rehetra izay mianjady amin’ny mpitsabo sy ireo mpiasan’ny fahasalamana tato ho ato, indrindra moa fa amin’izao vanim-potoanan’ny valanaretina covid-19 mahazo vahana eto Madagasikara izao. Nambaran’izy ireo hatrany mantsy fa ny mpiasan’ny fahasalamana manerana ny Nosy dia manao ny ainy tsy ho zavatra na andro na alina amin’ny fanavotana ireo mpiray tanindrazana aminy. Efa misokatra ny fanadihadiana mahakasika ity tranga ity.
ALAKAMISY 3 FEBROARY - ALAROBIA 9 FEBROARY 2022 (0) 5 février 2022 Midina ifotony mitondra fanampiana ho an’ireo traboina FIKAMBANANA FITIA (0) 5 février 2022 Tsy afa-bela ny Faritra Boeny na tsy dia nitondra takaitra aza RIVO-DOZA SY ANDRO RATSY (0) 5 février 2022 Hitadiavam-bahaolana maharitra tsy hiverenan’ny fahatapahana LALAM-PIRENENA FAHAROA (0) 5 février 2022